Warbixinta Sanadlaha ah ee Xadgudubyada Xoriyadda Saxaafadda Soomaaliya ee Sanadka 2008
Soomaaliya: Goob aan Xasilooneyn oo Khatar Ku ah Saxaafadda
Sawirro badan halkan ka daawo....
Jiritaanka iyo nolosha suxufiyiinta Soomaaliyeed khatar ayay ku soo jirtay sanadkii 2008, iyadoo weerarada lagu doonayay in lagu dilo, dhaawaco, dhibaateeyo, laguna aamusiyo suxufiyiinta ay ahaayeen kuwa joogto ahaa dhammaan sanadka gudihiisa, si ku cad warbixinta sanadlaha ah ee Xadgudubyada Xoriyadda Saxaafadda Soomaaliya ee uu soo saaray Ururka Qaranka Suxufyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Intii lagu guda jiray sanadka 2008, fowdada ka dhan ah suxufiyiinta iyo xadgudubyada xuquuqda saxaafadda ayaa waxay ahaayeen kuwo fool xun oo naxariis daran, kuwaaso ka dhacay dhammaan gobollada dalka.
Warbixinta sanadlaha ah ee sanadkan waxay muujineysaa weerarada khatarta ah ee lagu qaado suxufiyiinta, kuwaasoo ay ku jiraan dhacdooyinka aan laga hadli karin ee dilka, xarigga, dhaawaca, si xun ula dhaqanka, afduubka iyo hanjabaadda dilka ah, iyadoo ay raacsan tahay dhibaateynta iyo cabsi gelinta, kuwaasoo dhammaantood ka jira magaalooyinka ugu waaweyn dalka sida Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Boosaaso, Gaalkacyo iyo Hargeysa. Saxaafadda gaarka loo leeyahay ayaa waxaa sidoo kale loo caburiyaa si aad u daran.
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ waxa uu la socday, diiwaangeliyay, uuna ka hadlay dhacdooyin badan oo ku saabsan weerarada ka dhanka ah xirfadleyda saxaafadda iyo hay’adaha warfaafineed, warbixinteeda sanadkana waxa ay soo bandhigeysaa dhibaatooyinka iyo khatarta faraha badan ee hortaala suxufiyiinta iyo guud ahaan mujtamaca saxaafada.
Warbixinta sanadlaha ah ee NUSOJ ee sanadka 2008 oo loogu magac daray “Soomaaliya: Goob aan Xasilooneyn oo Khatar Ku ah Saxaafadda” waxay tilmaameysaa in xoriyadda saxaafadda Soomaaliya ay tahay mid gacanta ugu jirta dowladda federaalka KMG ah, kacdoonka islaamiga, maamulka Puntland iyo xukunka Somaliland, kuwaasoo si joogta ah u muujiyay in aysan jeclayn saxaafad madax-banaan.
Guud ahaan Soomaaliya, fowdada, weerarada, dambiyada aan la ciqaabin iyo cadaalad-darida ka dhanka ah suxufiyyinta iyo saxaafadda ayaa waxa ay ahaayeen kuwo baahsan, abaabulan oo ay ku lug lahaayeen dad kala duwan oo xadgubinyada geysanayay. Kuwa geysta dambiyada ka dhanka ah suxufiyiinta waxa ay sii wadeen in ay ka leexdaan cadaaladda, sida ku cad warbixinta.
“Suxufiyiintu si ula-kac ah ayaa loo ugaarsadaa maadaama ay isku dayayeen in ay ka waramaan dhibaatada heysata dadka, in ay si madax-bannaan ugu sheegaan dadka arrimaha taagan iyo in ay soo bandhigaan xadgudubyada khatarta ah ee xuquuqda aadanaha.
“Suxufyiinta iyo hay’adaha warbaahinta ee sida weyn loo dhageysto, isla markaana si muhiim u ah shacabka wax uga sheega dhinacyada dagaalamaya si madax-bannaan oo xirfadi ay ku jirto ayaa si joogta ah loo ugaarsadaa” sidaa waxaa yiri Xoghayaha Guud ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cismaan.
Warbixinta Sanadlaha ah ee Ururka Qaranka Suxufiinta Soomaaliyeed waxaa ay diiwaan gelinaysaa sidoo kale muuqaal wel-wel leh, kaasoo si cad u soo muuqanayay sanadka 2008.
Dhaqannada caburinta ah ee ka dhanka ah suxufiyiinta ayaa waxa ay u kordheen si kala duwan sanadkan aan ku jirno. Dilalka iyo handadaada Suxufiyiinta iyo xoriyadda saxaafadda ayaa waxay ahaayeen kuwa aad u daran. Inkastoo uu jiray sanadkan hoos u dhac ku yimid dilka loo geysto suxufiyiinta marka loo eego sanadkii hore ee 2007, waxaa haddana jiray isku dayo la doonayay in lagu dhibaateeyo suxufyiin, taasoo aan lagu guuleysan.
Warbixinta sanadlaha ah waxa ay sheegeysaa in Koonfurta Soomaaliya ay weli tahay meesha uga khatarsan ee saxaafad madax-bannaan ka shaqeyn karta, maadaama ay ka dheceen gobollo badan dilal, afduubyo, handadaadyo dil ah iyo weeraro. Goboladaa o sidoo kale ah gobollada dalka ee ay ugu dhimasho badan yihiin suxufyiinta. Waxaana magaalada Kismaayo lagu dilay Labo (2) suxufi iyadoon aan la ciqaabin kuwii dilkaasi geystay.
Dilka Nasteex Daahir Faarax oo ahaa Guddoomiye Ku-xigeenka Ururka Qaranka Suxufyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ waxaa uu naxdin ku noqday suxufyiinta iyo bulshoweynta Soomaaliyeed taasoo sababtay murugo aad u xun oo ku dhacday qoyskiisa iyo asxaabtiisa.
Xaaladda ka jirta Puntland ee gobollada Waqooyi Bari Soomaaliya ayaan ka fiicnayn in badan iyadoo maamulka ka jira halkaas uu isu diyaarinayo doorashada Madaxtinimada iyo Baarlamaaniga ah. Sida ku cad warbixinta sanadlaha ah Xaaladda amni ee sii xumaaneyso ee ka jirta Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garoowe ayaa waxay ka dhigtay cadaadis, handadaad iyo fowdo mid maalin waliba soo wajahda xirfadleyda saxaafadda ee ka howl-gasha Puntland. Qaar ka mid ah wasiirada Puntland ayaa waxa ay caadeysteen in ay ugu yeeraan Suxufiyiinta xumaan.
“Somaliland waa mid ka mid ah kuwa sida xad-dhaafka ah ugu xadgudba xoriyadda saxaafadda maadaama suxufiyiintu ay noqdeen kuwa ay la soo deristay weeraro inta ay ku jirto dadaalka ay ku dooneyso in ay ku hanato aqoonsi caalami ah oo ku aaddan madax-banaanida ay ku dhawaaqday in ay kaga go’day Soomaaliya. Handadaada ka dhanka suxufyiinta madaxa-banaan ayaa waxaa ay ka jiraan magaalooyinka Hargeysa, Boorame iyo Barbara” ayuu ku daray Cumar Faaruuq Cismaan.
Warbixin sanadeedka waxa ay faahfaahineysaa ku dhawaad sodon (30) suxufi iyo shaqaale warbaahineed oo la xiray, kuwaasoo dhammaan marka laga reebo hal suxufi la sii daayay, iyagoon wax Maxkamad sharci ah. In ka badan sodon (30) suxufi ayaa waxaa la soo gaarsiiyay handadaad dil ah. Inta badan handadaadahan ayaa waxaa geystay dambiilayaal sida cad ku shaqeynaya rabitaanka siyaasiyiinta qaarkood.
Xoogaga wax iska caabinta ayaa sidoo kale waxa ay kusoo rogeen suxufiyiinta xanibaadyo, ayagoo u shaagay in ay naftooda khatar geli doonto haddii ay ka waramaan waxyaabo aysan ayagu dooneyn ain laga hadlo. Sidaasi darteed sheekooyin badan oo ku saabsan xoogaga kacdoonka ayaa ah kuwa aan la baarin oo aysan ka hadlin saxaafadda.
Tan iyo markii Kacdoonka Islaamiga ah ay la wareegeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa waxaa ka qaxay magaalada Kismaayo una qaxay dalka Kenya ugu yaraan Lix suxufi, iyagoo u cabsanaya naftooda. Suxufyiintan ayaa waxaa la soo gaarsiiyay handadaad dil ah, kadib markii loogu yeeray in ay la shaqeynayeen maamulkii hore ee taageersanaa dowladda KMG. Marka laga soo tago handadaada waxa ay xanibaad ku soo rogeen warbaahinta ka howl-gasha gobolada Gedo iyo Jubbooyinka kuwaasoo loo sheegay in aysan sii deyn Karin heesaha ama musikada, ayagoo ku macneeyay in “Diinka Islaamku” ay mamnuucday.
Marka laga soo tago rajada wanaagsan ee laga qabay xukuumada Ra’iisal Wasaare Nuur Xasan Xuseen ay kor u qaadi doonaan xurmado loo hayo xoriyatul qowlka ayaa haddana waxa ay xaaladdu aheyd mid sii xumaaneysa marka laga fiiriyo qeybaha ee xoriyada saxaafadda.
Suxufyiinta ka howl gasha magaalooyinka Baydhabo, Muqdisho iyo Kismaayo ee dareenkooda muujiya ama dhaliila dowladda ama xoogaga kacdoonka ayaa waxaa lagu baqdin geliyaa in la aamusin doono, la dili doono ama lagu qasbo in ay is-faafreebaan. Tani waxay ka dhigtay suxufiyiinta gebi ahaanba kuwa aan awood u lahayn in ay doonaan ayna soo bandhigaan runta.
Kororka erayada dagaalka ee u dhexeeya labada garab ee Isbaheysiga dib u xureynta ayaa waxaa uu sidoo kale kordhiyay khatarta soo wajahaysa suxufyiinta. Xirfadleyda saxaafada ayaa waxaa ay ku nool yihiin cabsi joogta ah oo sheegaysa in loo dilayo haddii ay ka waramaan khilaafka daakhiliga ah ee u dhexeeya Isbahaysiga Dib u Xureynta iyo cidda loogu yeerayo in ay tahay hogaanka sharciga ah ee kooxdan.
Warbixintu waxa ay sidoo akle sheegeysaa in saxaafadda ayadoo ku waxyeelowday dagaalka naxariis darida ah ayaa xadgudubyada xuquuqaha bulsho iyo dhaqaale ee suxufiyiintu waxa ay daciifiyeen xuquuqda ay leeyihiin xalaado shaqo oo cadaalad ku dhisan una wanaagsan. Dagaalka ka laba lixaadsaday bishii Desember ee 2006 Koofurta Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu xumeeyay xaaladaha nololeed ee suxufiyiinta maadaama xarumaha warbaahineed aysan awoodin in ay bixiyaan mushaarada suxufyiinta sababtoo ah xarumaha warbaahineed oo si adag dhakhli ku abuura.
Sharciga saxaafada ee la ansaxiyay bishii Desember ee 2007 ayaan dib ku noqosho lagu sameynin kahor inta aan la meel marin. Sharcigu waxa uu soo bandhigay xanibaado badan oo looga dan lahaa in lagu koontaroolo, laguna curyaamiyo saxaafadda gaarka loo leeyahay. Waxa uu sidoo kale dajinayaa sharuudo adag oo ku saabsan diiwaangelinta, waxaana uu sahlayaa faragelin balaaran oo ay Wasaarada Warfaafintu ku sameyso. Sharcigu waxaa uu soo rogay xanibaado adag oo ku aadan xoriyadda saxaafadda iyo xoriyatul qowlka, waxaana uu ka dhigayaa ka koobnaanshaha, shaqada iyo madax-banaanida golaha saxaafadda qaranka mid hoos tagay koontaroolka dowladda. Bulshada saxaafadda waxaa ay muujisay dareenkeeda dhabta ah ee ku aadan sharciga saxaafadda kaasoo caburin kara xoriyadda saxaafadda, laakiin is-qabqabsiga hogaaneed ee ka jira dowladda federaalka KMG ah dhexdeeda iyo awood la’aanteeda ay ku koontarooli karto dalka badankiis darteed ayaan sharciga loo meel marin weli.
Qaar ka mid ah xarumaha warbaahineed ayaa waxaa ay xanibeen awoodda suxufyiinta ka shaqeysa ay kusoo saari karaan warar iyo xog madax-banaan, cadaaladi ku jirto, isku dheela tiran oo daacadnimo leh. Cadaadis tifatir oo soo koray suxufyiin ayaa waxaa uu ku qasbay in waxyaabaha qaar qaloociyaan, buunbuuniyaan, ayna tabiyaan waxyaabo ay og yihiin in ay been yihiin sababtoo ah waxaa sidaa ku raba milkiilayaasha xarumahooda warbaahineed.
DHOWR XAQA SUXUFIGA IYO SAXAAFADDA
(Baaqa NUSOJ ee sanadka 2008)
Saxaafaddu waxaa lagu tiriyaa inay tahay awoodda Afaraad ee uu Qaran waliba leeyahay, isla markaana waa midda sababta horumar iyo nabad ka aslaaxda geyigaas.
Ummad walba oo xor ah masiirkeeda waxa uu ku xiran yahay jiritaanka saxaafad xor ah. Saxaafadduna waxa ay qeyb muhiim ah ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka iyo helitaanka nabadda iyo in la helo sharci iyo kala dambeyn waarta.
Saxaafadda Soomaaliya oo ku shaqeynaysa dhibaato ayaa waxaa marqaati ma doonto ah in Saxafiyiinta Soomaaliyeed ay muujiyeen dhabar adayg iyo howl-karnimo ay ugu adeegayaan bulshadooda, inkastoo ay dhici karto qaladaad yar oo ka imaan kara dhinaca farsamada Suxufiyiinta, taasoo ay ugu wacnaan karto tababarro iyo aqoon saxaafadeed oo aanay helin Suxufiyiinta Soomaaliyeed, maadaama waddankeenu uu gebi dhaclaynayay 18-kii sano ee u dambeeyay.
Haddaba, maadaama dhibaatadaas adag ay Saxafiyiintu ku shaqeynayaan ayaa haddana waxaa jira dibindaabyeyn lagu hayo saxaafadda, waxaana si wadajir ah u dhaleeceyneynaa xadgudubyada ka dhanka ah xoriyadda saxaafadda sida: xariga sharci-darrada ah, dilka, handadaada iyo xanibaadda loo geysto dadka ka shaqeeya saxaafadda, waxa kale oo aanu cambaareyneynaa xeritaanka, faafreebka iyo hakinta xarumaha warbaahineed.
Waxaan dhaleeceyneynaa xariga aan sharciga ku dhisnayn ee suxufiyiinta loo geysto, waxaana ka welwelsannahay xirnaanshaha xarumaha Idaacadaha qaar, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ku xadgudbaya xoriyadda saxaafadda in ay joojiyaan dagaalka iyo xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda.
Haddaba, waxaa laga maarmaan ah in saxafiga iyo saxaafaddu ay ku dadaalaan anshaxa wanaagsan, kana dhowrsadaan ficilada wax u dhimi kara sharafta suxufiga sida eexda, danaysiga, qabyaaladda, iwm, waana in ay muujiyaan midnimo iyo xirfad wanaag si ay ugu gudbaan waqtigan adag.
XAQA IYO XUQUUQDA SAXAFIGU LEEYAHAY SI LOO DHOWRO WAXAAN KU BAAQEYNAA:
1. In la damaanad qaado xorriyadda saxaafadda.
2. In Saxafiyiintu si wadajir ah u muujiyaan sida aanu uga welwelsanahay xadgudubyada ka dhanka ah xorriyadda saxaafadda ee meeshii ugu sareysay gaaray sanadka 2008.
3. In dadka ka shaqeeya saxaafadda nabadgelyadooda la dhowro.
4. In aanu muujinno in dhammaan noocyada faaf-reebka toosan amaba dadban ay xadgudub ku yihiin madax-bannaanida iyo xoriyadda saxaafadda.
5. In Suxufiyiintu kala saaraan siyaasadda iyo xirfadda saxaafadeed, maadaama faragelinta siyaasadeed ee toosan ama dadban ay wax u dhimeyso tayada warbaahinta xorta ah.
6. In aan ka codsanno dhinacyada siyaasadda dalka in ay damaanad qaadaan xoriyadda iyo nabadgelyada suxufiyiinta ajnabiga ah ee dalka yimaada iyo shaqaalaha u shaqeeya wakaaladaha wararka ee ajnabiga ah.
7. In la soo daayo saxafiyiinta ajnabiga ah iyo kuwa Soomaaliyeed ee afduubyada loogu heysto qeybo ka mida dalka Soomaaliya.
8. In aan ugu baaqno Saxafiga iyo saxaafadda in ay xurmeeyaan heerarka caalamiga ah ee saxaafadda u degsan iyo danta Qaranka ee dalkooda.
Xoghayaha Warfaafinta Ururka NUSOJ